मिलान डर्बी, क्रामरिच र बार्सिलोनाः युरोपको यो सप्ताहन्तको आकर्षण – Talking Sports
इटालिको प्रथम श्रेणीमा जुर्मुराएको एसी मिलान इन्टर मिलानलाई पराजित गर्दै डर्बीको राजा बन्ने दाउमा हुनेछ बायर्न म्युनिखलाई स्तब्ध पारेको होफेन्हाइम जर्मन बुन्डेसलिगामा अर्को ठूलो शिकारको लागि उत्रनेछ । स्पेनिस महारथी बार्सिलोना भने अधकल्चो ला लिगा खेलको लागि तयार भइरहदा युरोपियन फुटबलमा यो सप्ताहन्त के–के हेर्न लायक छन् त ?
होफेन्हाइमले अर्को स्तब्धपूर्ण नतिजा निकाल्न सक्ला ?
गत महिना च्याम्पियन्स लिग र बुन्डेसलिगा च्याम्पियन बायर्नलाई ४–१ ले हराउदै होफेन्हाइमले हेडलाइन बनायो । बायर्नका पुर्व बैकल्पिक प्रशिक्षक सेबाष्चियन होनेसले व्यवस्थापन गरेको होफेन्हाइम बोरुसिया डर्टमण्डबिरुद्ध पनि त्यस्तै नतिजा दोहोर्याउन चाहन्छ ।
होफेन्हाइम र डर्टमण्डले बुन्डेसलिगामा पहिलो तीन खेलबाट ६ अंक बटुलेका छन् र यो खेल युरोपका दुई उत्कृष्ट उदीयमान स्ट्राइकरहरुको भिडन्त वरिपरि घुम्नेछ ।
नर्वेजियन स्ट्राइकर एर्लिङ्ग हालान्ड डर्टमण्डको आक्रमणको मुटु बनिसकेका छन् र पछिल्लो पटक मैदानमा उत्रदा उनले फ्राइबर्गबिरुद्धको ४–० को जितमा दुई गोल गरेका थिए ।
तर बुन्डेसलिगामा अहिलेका सर्वाधिक गोलकर्ता भने होफेन्हाइमका आन्द्रेज क्रामरिच हुन् । उनले जर्मन कपमा पनि दुई गोल गरिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बिश्रामका दौराना क्रोएसियाका लागि खेल्दा पनि गोल गर्ने फर्ममै रहेका क्रामरिचले गत सिजनको अन्तिम दिन डर्टमण्डलाई ४–० ले ध्वस्त बनाउदा सबै गोल उनले नै गरेका थिए ।
के मेस्सीलाई बिश्राम दिइएला ?
अर्जेन्टिनालाई बोलिभियाबिरुद्धको बिश्वकप छनोट खेलमा जित दिलाएपछि बार्सिलोनाले च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत फेरेंकभारोससँगको खेल अघि शनिबार बेञ्चमै राख्ने प्रबल सम्भावना रहेको देखिन्छ । बार्साले ला लिगामा शनिबार गेटाफेबिरुद्ध खेलिरहेको छ ।
अर्को सप्ताहन्तमा सिजनको पहिलो एल क्लासिकोमा रियल म्याड्रिडको सामना गर्न गइरहेका प्रशिक्षक रोनाल्ड कोमनका लागि बिचमा गेटाफे बिरुद्धको खेल अधकल्चो रहनेछ । बार्साले शुरुवाती तीन खेलबाट ७ अंक बनाएको छ ।
रियलको चार खेलबाट १० अंक रहेको छ भने उसको लागि काडिजबिरुद्धको खेल त्यति संघर्षपूर्ण नहुने आंकलन गरिएको छ ।
उच्च आत्मबिश्वास बोकेको एसि मिलान
जनवरी, २०१६ मा इन्टर मिलानलाई ३–० ले हराए यता एसि मिलान ८ डर्बि खेलमा जित हात पार्न असफल रहेको छ । एसि मिलान इन्टरसँग पछिल्लो चार खेलमै पराजित रहेको छ भने सात बर्षमा आफ्नो लोकल प्रतिद्वन्दीसँग एक पटक मात्र अंक तालिकामा माथि रहेको थियो ।
शनिबारको ‘डर्बि डेला मडोनिना’ अघि भने एसि मिलानले यस पटक भने पासा पल्टिने अपेक्षा गरेको छ । एन्टोनियो कोन्टे युभेन्टससँग अघिल्लो सिजन मात्र एक अंकले चुकेको थियो र यो सिजन पनि तीन खेलबाट ७ अंक बटुल्न सफल भइसकेको छ । तर मिलान भने पहिलो तीन वटै खेल जित्दै अंक तालिकामा एट्लान्टासँगै संयुक्त पहिलो स्थानमा रहेको छ ।
शनिबारको खेलका लागि कोरोनको संक्रमणबाट मुक्त भइसकेको स्ट्राइकर ज्लाटन इब्राहिमोभिचको साथ मिलानलाई हुनेछ । इन्टरले ट्रान्सफरमा राम्रो गर्दै टिम बलियो बनाएपनि हामीले उसँगको दुरीलाई कम गरिसकेको छौ । अब हामीले मैदानमा यसलाई साबित गर्न मात्र बाकी छ, इन्टरका गोलकिपर जियनलुइजी डोनारुमा भन्छन् ।
पुनरागमनको अपेक्षमा नापोली
युभेन्टससँगको खेल नखेलेको कारण तीन अंक गुमाउन पुगेको जेनारो गाट्टुसोको नापोली एट्लान्टाबिरुद्धको खेलबाट पुनरागमन गर्ने अपेक्षामा रहनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बिश्रामअघि दुई कोरोना भाइरसको केस अगाडी आएपछि स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीहरुको निर्देशनमा नापोलीले युभेन्टसको भ्रमण नगर्दै आइसोलेसनमा बसेको थियो ।
फलस्वरुप नापोलीलाई ३–० ले खेल हारेको कारवाही गरियो र युभेन्टसलाई तीन अंक दिइएको थियो । सिजनको पहिलो दुई खेल आरामले जितेको नापोलीका लागि यो ठूलो झड्का थियो ।
कठिन समयको सामना गरिरहेको नापोलीका लागि अब बलियो एट्लान्टालाई पन्छाउनु पर्ने चुनौति छ । एट्लान्टा नापोली गइरहेको छ तर शुरुवातका लगातार तीन खेल जितेको कारण उसको मनोबल भने उच्च छ । गत सिजनदेखि नै उत्कृष्ट खेल पस्कदै आएको एट्लान्टाले यो सिजन तीन खेलबाट १३ गोल गरिसकेको छ ।
पोर्चुगिज एल क्लासिको
पोर्चुगलको घरेलु सिजनको पहिलो एल क्लासिकोमा शनिबार स्पोर्टिङ्ग र पोर्टो भिड्दैछन् तर यसको असली बिजेता भने बेन्फिका हुनेछ । बेन्फिका दुई परस्पर प्रतिद्वन्दी भन्दा तीन अंक अगाडी रहेको छ र कुनै पनि नतिजाले उसलाई फाइदा नै गर्नेछ ।
स्पोर्टिङ्ग कुनै समय क्रिष्चियानो रोनाल्डो र ब्रुनो फर्नान्डेज खेलेको क्लब होला तर २००२ देखि घरेलु उपाधि जित्न असफल रहेको उसले पोर्टोलाई पछिल्लो चार बर्षमा हराउन सकेको छैन ।
ट्रान्सफर डेडलाइनको दिन फुल ब्याक एलेक्स टेलेसलाई म्यानचेस्टर युनाइटेडमा बेचेको पोर्टोको ध्यान अब आउने च्याम्पियन्स लिगको म्याचेस्टर सिटीबिरुद्धको खेलमा रहेकोले यो स्पोर्टिङ्गका लागि जित हात पार्ने सबैभन्दा उपयुक्त समय हुनेछ ।